Ukulondoloza Iwebhusayithi Ye-WordPress - Umhlahlandlela Ovela Ku-Semalt
Amawebhusayithi amaningi e-commerce akhiwe kwi-WordPress. Abantu abahlukahlukene bazibuza umphumelaukufeza ama-hacks ahlukahlukene angase avele kumawebhusayithi ahlukahlukene we-WordPress. Ngokuzithoba, i-intanethi igcwele abantu nabo bonkeizinhlobo zezenzo ezinonya. Kusuka kugaxekile ukuze udideke, kucacile ukuthi abaduni bangakwazi ukukhomba i-website yakho bese benza enye yobubi baboizenzo zenhloso. Ngokuvamile, abaduni bazenza sengathi banesithakazelo ekukhusheni kwakho kwe-SEO noma omunye umkhankaso owenzayo.Esikhundleni salokho, baqeda ukwenza amanye ama-hacks amakhulu kakhulu.
Ama-hacks ajwayelekile angabandakanya ukubhalwa kwe-script (cross) scripting (XSS), ukuphanga, ukweba umuntu siquulwazi kanye nokudluliselwa okukhohlisayo. Abantu abaningi bathathe ulwazi lwekhadi lesikweletu ngamakhasimende ukuze bahambe futhi benzeidlulisela emuva ngemuva kwabo. Kwezinye izimo, bangaletha iwebhusayithi bese bebingelela abantu ngezinto ezihlekisayo kwi-akhawunti yabo yomsebenzisi.Ngenxa yalokho, ukuphepha kwewebhusayithi yakho ye-WordPress kanye nokwamakhasimende akho kuxhomeke kakhulu ekutheni uqaphele kangakananiukugcina laba baduni.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelele Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt Amasevisi weDividal, afaka ezinye zezinyathelo zokufaka ama-Hack-proof, ezingalondoloza iwebhusayithi yakho ngokumelene nabaduni:
1. Sebenzisa amakhasi okungena okuphephile.
Ikhasi lokungena ngemvume le-WordPress ngokuvamile alilondekile kakhulu. Okwei-hacker eqeqeshiwe, kungenzeka ukuthi wenze ngendlela engafanele indlela yakho kwi-database yewebhusayithi kusuka kulolo khasi lokungena ngemvume. Uma wenza kwakhoIsayithi le-WordPress, kubalulekile ukucabangela ukungeza i-wp-login..php noma / wp-admin / kusizinda sewebhusayithi osivikelayo. Lesi silinganiso singakwaziukuvimbela loluhlobo lokungena kanye nezinye ukuhlaselwa eshibhile. Ukusebenzisa amaphasiwedi aphephile kungasiza futhi iphaneli yokuphatha yesayithi lakho liphakemeukuphepha. Ngenxa yalokho, gwema amaphasiwedi avamile afana ne-12345 noma iphasiwedi elula ukuqagela.
2. Bhala idatha usebenzisa i-SSL.
Lolu ungqimba lwezokuphepha luqinisekisa ukuthi ukushintshaniswa kweidatha phakathi kwesiphequluli nesiphakeli kuphephile. Ngenxa yalokho, i-hacker ingaba nzima kanzima ukuchithwa ulwazi olukhona ku-database.Esikhundleni sokuba namagama nezinombolo, i-hacker ihlangana nekhodi.
Enye yezindlela zokuqinisekisa ukuphepha kwakhoamaklayenti angama-2fa. Abanye abaduni abaphumelelayo baphela ngokuthola amaphasiwedi kuma-akhawunti amaningi. Noma kunjalo, ukuqinisekiswa kwe-2-factorengeza ungqimba wokuphepha ku-equation. Ngenxa yalokho, iphasiwedi ngokwayo ayanele. Ikhodi ekhiqizwa ngumsebenzisi kufanele itholakalekusuka kumlayezo wombhalo weselula, okungenzeka ukuthi awukwazi ukwaziswa kwe-hacker.
Abahlaseli bakha isisekelo seningi le-cyber-crime elibhekene nomphakathi wethu namuhla. Njaloukuthengiswa kwe-intanethi kuncike ekusebenzeni kwe-Hack noma umsebenzi we-scam. Kubalulekile kumqambi wewebhusayithi ukuqinisekisa ukuthi izindlelaukuvikelwa kwabaqashi kufanele baqaphe futhi baqinisekise ukuthi bahlala bevikelekile kulezi zihlaselo. Ukuphepha kwe-e-commerce yakhoIwebhusayithi isesandleni sakho. Lesi sikhombiso sinikeza izindlela ezithile zokungaphazamisi, ezingakhuphula ukuphepha kwesayithi lakho. Kwezinye izimo,ukuvikela iwebhusayithi yakho ngokumelene nabaduni kungaqinisekisa ukuthi imizamo yakho ye-Search engine optimization (SEO) ithwala izithelo njengoba i-Google ngeke ibeke uphawuisayithi lakho njengalondekile.